गगन थापाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अवसर कि चूनौती ? « Surya Khabar
गगन थापाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अवसर कि चूनौती ?
काठमाण्डौ । आफ्नो जीवनमै पहिलो पटक स्वास्थ्य मन्त्री बन्न सफल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापालाई अधिकांश नेपालीहरुले आशाको केन्द्रको रुपमा हेरेका छन् । गगन थापा नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन, समग्र नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने एउटा जुझारु युवा नेतृत्वको रुप सबैले स्वीकार गरेको नाम हो । यद्यपि, केही अपवाद विवाद बाहेक उनी नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा निश्कलंक नेतृत्व हो । त्यसकारण, पनि गगन थापाको पहिलो पटकको सरकार नेतृत्वको यो घडीलाई सबैले महत्वका साथ हेरिरहेका छन् ।
वास्तवमा नेपाल लामो राजनीतिक उत्तारचढावका बीचबाट गुज्रिदै आएको मुलुक हो । ६ दशकभन्दा बढी समय हामीले राजनीतिक अभ्यासमा खर्च गरिरहेका छौ । आर्थिक क्रान्तिको नारा नारामा मात्र सिमित हुँदै आएको छ । एकैपटक राजनीतिक क्रान्ति सफल भएका छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीन आज संसार अति विकसित राष्ट्रहरुको कोटीमा पुगिसकेका छन् । एउटा समृद्ध देश बनाउनका लागि कुशल नेतृत्व अनिवार्य शर्त हो । त्यसर्थ, पनि नेपालले पछिल्लो समयमा जुझारु र कुशल नेतृत्वको खोजी गरिरहेको छ । नेपालीहरुको नजरमा गगन थापामा त्यो भरोसा देखिदै आएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जब दलीय नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्छ, त्यसपछि विस्तारै आफ्नो राजनीतिक छबि ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ । यसमा युवा नेता थापाले आफ्नो साख जोगाउनु पहिलो चुनौती हुनेछ । शुक्रबार सितलनिवासबाट सपथ लिएलगत्तै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका छन् ।
कार्यभार सम्हाले लगतै उनले वैदेशिक रोजागारीमा जाने युवाहरुसँग जोडिएको अति महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य परीक्षण र त्यसले समस्यामा परेका युवाहरुको विषयमा अध्ययन गर्ने समितिको गठन गर्ने सवालमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस लगत्तै उनले देशभर बिना दर्ता सञ्चालनमा आएका औषधी पसल र त्यसको नेतृत्वलाई कार्वाही गर्ने र सचेत गराउने विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण निर्देशन दिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाभित्र देखिन थालेका यी सकारात्मक संकेतहरु ह्ुन् । उनले सुरुमै समाजमा देखिएका आधारभूत समस्यका विषयमा सचेतता देखाएका छन् । यो रफ्तारलाई उनले निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ ।
गगन थापामाथि ठूलो जोखिम
आशा लाग्दो र भरोसा योग्य नेतृत्वको खोजीमा रहेको नेपाली समाजले अहिलेसम्म मनले खाएको राजनीतिक नेतृत्व पाउन सकेको छैन् । अघिल्लो पुस्ताका नेताहरुमा समेत आशा मारिसकेको नेपाली समाजले गगन थापाहरु जस्तै केहीमा अझै पनि आशा मार्न सकिरहेको छैन ।
मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी आएको यो बेला थापाले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । थापाले जुध्नुपर्ने अर्को चूनौती भनेको वैचारिक चूनौती पनि हो । देशमा अहिले कम्युनिष्ट वैचारिक धरातल र प्रजातान्त्रिक धरातलबाट आएका विचारबीच टक्कर छ । त्यसलाई सन्तुतलनमा ल्याएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यस्तै पछिल्लो समयमा डा. गोबिन्द केसीले आफ्नो मुद्धामार्फत देशलाई तताएका छन् । सोही मुद्धाको छिनोफानो गर्ने महत्वपूर्ण मन्त्रालय उनको काँधमा आएको छ । यसलाई हल गर्नु उनको अर्को ठूलो चूनौती हुनेछ । नेपालमा डा.केसी र थापा उस्तै छबि भएका नेतृत्व र नागरिक हुन्, जसबाट नेपालीहरुले ठूलो आशा गरेका छन् । डा. केसीका माग थापाले बेलैमा सम्बोधन गर्न सके उनको छबि थप उचाईमा पुग्नसक्छ ।
थापासँग देशले गरेको अपेक्षा
छिमेकी देशहरु भारत र चीन एक्काइशौ शताब्दीकै नेतृत्व गर्दै विश्वकै शक्तिशाली मुलुकहरुको सुचीमा देखापरेका छन् । सायद, एक दशकभित्र एसियाले विश्वको नेतृत्व गर्ने तरखर गर्दैछ ।
ती देशको बीचमा रहेको सानो र समुन्नतीको सपना बुनिरहेको नेपाललाई हाँक्ने नेतृत्व पनि त्यस्तै चाहिएको छ । आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा ठूलो प्रगति यो देशले गर्नुछ । त्यसका लागि पनि थापा जस्ता नेताहरुको आवश्यकता देशलाई अपरिहार्य छ । उनको पार्टीभित्र र बाहिर देखिएको इमान्दारिता, जुझारुपन, कुशल नेतृत्व समेत सबैका लागि ग्रहणयोग्य छन् ।
उनले पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पनि जनताले निकै अपेक्षा गरेका छन् । मौसमी सरकारमा सामेल भएपनि थापाले त्यो समयमा केही बोल्ड निर्णयहरु सके उनको छबि थप उचाईमा पुग्ने निश्चित छ । गगन थापा भोलीको नेपाली कांग्रेसको सभापति समेत हुन् र यो देशको राजनेता बन्ने छबि बोकेका नेता हुन्, त्यसैले यो यात्रामा उनले कुनै दुस्साही निर्णयहरु लिनु ठूलो गल्ती हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यसर्थ, स्वास्थ्य मन्त्रालय थापाको लागि भोलिको पार्टी सभापति हुँदै देश र जनतासँग घुलमिल हुने अविरल यात्राको एक साक्षी हुने निश्चित छ ।